प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४ औं महाधिवेशनमा होमिएको छ । पार्टीभित्र नयाँ संकट नआएमा आगामी फागुन १० गते कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउने पक्कापक्की छ । पार्टी नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरू पनि टन्नै देखिएका छन् ।
महाधिवेशनको तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार काम नभएको भन्ने गुनासाहरू पनि धेरै आएका छन् । सभापतिका आकांक्षी नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले फागुनमा महाधिवेशन नगर्ने खेल खेलेको आरोप लगाउँछन् ।
कार्यतालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरणका कामहरू हुन सकेका छैनन्, सिटौलाले लोकान्तरसँग भने, '१३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारीहरूले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । महाधिवेशनको सुनिश्चितता नगरिकन नेतृत्वमा जान आकांक्षा पालिनु गलत हो ।'
लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले नेता सिटौलासँग पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थिए, प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
पार्टीले महाधिवेशनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?
केन्द्रले बनाएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको कार्यतालिका लगायत समग्र महाधिवेशनसम्बन्धी कामहरू अहीले प्रभावित भएको देख्छु मैले ।
केन्द्रीय सचिवालयको काम कारवाहीको मूल्यांकन गर्दा फागुनमा महाधिवेशनको तयारी छैन । फागुनमा महाधिवेशन नगर्ने डिजाइन गरेको पाइन्छ । त्यो अवस्थामा हतारिएर सबै कुरा बोल्न आवश्यक छैन ।
१४ औं महाधिवेशन जहिले होला, तर हाम्रो बलियो टीमको प्रस्तुति हुनेछ । १३ औं महाधिवेशनको जस्तो आंशिक टीम होइन, फूल फ्लेज्ड टीम रहनेछ । र प्रतिस्पर्धा दह्रो हुनेछ ।
दलहरूभित्र विवाद हुनु सामान्य भएपनि कांग्रेसभित्रको विवाद ठूलो देखिन्छ । समाधानउन्मुख छैन । एकपक्षीय रूपमा भटाभट विभागहरू गठन र नियुक्तिको शृंखला चलिरहेको छ । तपाईंहरूले विवाद मिलाउन किन नसक्नुभएको हो ?
एक महिनाअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवासमा वर्तमान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सबैलाई बोलाउनुभएको थियो । एक महिना अघितिरको कुरा हो ।
त्यहाँ मैले मेरो कुरा स्पष्ट राखेको थिएँ । अहिलेसम्म जेजे गर्नुभयो, अब सबै कुरा रोक्नुस भनेर भनेको थिएँ । त्यसपछि पनि उहाँले विभागहरू गठन गर्ने र नियुक्ति गर्ने काम रोक्नुभएको छैन । त्यो चिन्ताजनक छ ।
भनेपछि सभापतिको डिक्सनेरीमा 'ब्रेक' भन्ने शब्द नै रहेनछ ?
त्यही त, मैले त्यतिबेलै सबै कुराहरू रोक्नुस् भनेर भनेको हो । यहाँसम्म जे-जे गर्नुभयो ठीकै छ, अब चाहिँ सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय थियो । मेरो कुरा सुन्नुभएन । त्यहाँदेखि यता गरेका कामहरूमा मेरो आपत्ति छ । त्यहाँदेखि यता जे गर्नुभएको छ त्यो गलत हो । महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने बेलामा विभागहरू गठन गर्दै जानु औचित्यपूर्ण छैन । यो उचित होइन ।
कांग्रेसमा सभापतिका आकांक्षीहरू टन्नै छन् । तपाईं पनि एउटा आकांक्षी हो । अन्य आकांक्षीहरूसँगको तपाईंको अहिले कस्तो खालको संवाद हुन्छ ?
पार्टीका नेताहरूसँग जस्तो संवाद हुन्छ, त्यस्तै छ ।
प्रतिस्पर्धीका हिसाबले केही न केही कुराहरू त हुन्छन् होला नि ?
प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणलाई लिएर कुराकानी केही भएको छैन । आमनेसामने र भेटघाट कुराकानी भएको भनेको एक महिनाअघि सभापतिकै निवासमा सबैसँग एकमुष्ट भएको हो । कुनै कुनै भर्चुअल बैठकमा देखादेखी हुन्छ । तर पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी आन्तरिक बैठक भएको छैन । १३ औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलको टीमबाट जो–जो साथीहरूले पदाधिकारी जित्नुभएको छ उहाँहरूले के कुरा गर्दै हुनुहोला भन्ने उहाँहरूकै कुरा हो । मेरो खासै कुराकानी भएको छैन ।
महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका कार्यान्वयन नहुनुमा दोष कसको हो ?
सभापति र महामन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी महाधिवेशनको तयारी गर्नु हो । महाधिवेशन हुने निश्चित भएपछि जेमा मन लाग्छ, त्यसमा उम्मेद्वारी दिए हुन्छ । महाधिवेशनको तयारी नगर्ने, उम्मेदवारीको तयारी गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
सभापति र महामन्त्रीको पदीय नेतृत्व हुन्छ पार्टीमा । परम्परागत दृष्टिकोणले भन्ने हो भने उपसभापति भन्ने नै थिएन कांग्रेसमा । १२ औं महाधिवेशनबाट उपसभापतिको व्यवस्था गरिएको हो ।
तर पार्टीको बैठक नहुँदा सभापतिको विचारलाई पार्टीकै निर्णय मानिन्छ । तर सचिवालय चाहिँ महामन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ । सभापति र महामन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी भनेको त केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम महाधिवेशनको तयारी गर्नु हो । कतिपय जिल्लाको समायोजन नै उहाँहरूले टुंग्याउन दिनुभएको छैन ।
अहिले क्रियाशील सदस्य र नवीकरणका फारमहरू जिल्ला जिल्लामा जान सकेका छैनन् । फागुनमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव जसरी पदाधिकारीको सल्लाहमा पारित गर्नुभयो, त्यो प्रस्ताव त कार्यान्वयन नहुने देखियो । प्रस्ताव गरिएको महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न नसक्नेहरूले फेरि सभापति हुन्छु भन्दै किन हिँडेको हो, मैले बुझेको छैन ।
सभापति देउवाको टीममा रहेका विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक रूपमै आफूलाई सभापतिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई ठूलै परिवर्तन गर्न खोजेको देखियो नि !
त्यो उहाँको इच्छा हो । सभापतिमा उठ्ने हो भने त प्रेस सम्मेलन गरेर मज्जाले भने हुन्छ नि त ! अरू कुरा त पछि समय आएपछि को कता भन्ने थाहा हुन्छ । आकांक्षा त जसले पनि राख्न पायो । कसैले आकांक्षा राख्दैमा महत्त्वपूर्ण फेरबदल नै आयो भनिहाल्न मिल्दैन ।
१३ औं महाधिवेशनमा तपाईंले बनाउनुभएको टीम नै अबको महाधिवेशनमा कायम रहन्छ कि, त्यसमा फेरबदल हुन सक्छ ?
हाम्रो पहिलेको टीम सानो र आंशिक थियो, अहिले विस्तारित हुन्छ ।
पुरानो टीमकै सदस्यहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ र त्यो टीम विस्तारित भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छ ।
भनेपछि गगन थापा फेरि पनि महामन्त्रीकै दाबेदार हो ?
त्यो के हुन्छ अहिले भन्ने कुरा भएन । पछि समय आएपछि को कहाँ उठिएला भन्ने थाहा हुन्छ ।
अहिले संरचनाहरू पनि बढेका छन् । पहिला जिल्ला अधिवेशनपछि केन्द्रीय महाधिवेशनको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । अहिले ७ वटा प्रदेशको महाधिवेशनपछि मात्र केन्द्रको समीकरण अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले हतारिएर अहिले पद किन बाँड्नु ?हाम्रो पुरानो टीम कायम रहन्छ र त्यो थप विस्तारित हुन्छ । यसपटक त्रीपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ पार्टीमा भन्ने मैले बुझेको छु ।
तपाईंको टीमले उम्मेद्वारी घोषणा कहिले गर्छ ?
समय आएपछि घोषणा हुन्छ । महाधिवेशनको टुंगो छैन, अहिले घोषणा गरेर के अर्थ हुन्छ ?
अन्तिममा एउटा प्रश्न, प्रतिस्पर्धाका लागि तपाईंको टीमको देशव्यापी तयारी कस्तो छ ?
सबै साथीहरूसँग कन्ट्याक्टमा छौं । साथीहरूले देशैभर एउटा अभियानकै रूपमा यसलाई लिएर जानुभएको छ । म पनि लागिरहेको छु ।